Esi Track aha n'ihi na gị na iTunes Music na ogbe
> Resource> iTunes> Esi Track aha maka iTunes Library na ogbe
Mgbe ị na-eji iTunes dọwara CD ma na-songs, nwere ike ị gaghị aghọta onye ọ bụla n'ihi na track aha na-egosi dị ka Track 01, Track 02 na ndị ọzọ. Na songs ị ga-esi si isi mmalite ndị ọzọ, dị ka ndekọ, nwere ike ọ gaghị ziri ezi track aha. N'oge ndị dị otú ọnọdụ, ị ga-mkpa a oké ngwá ọrụ iji nweta track aha maka gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na ogbe. Wondershare TidyMyMusic maka Mac (Wondershare TidyMyMusic) kwesịrị oké nhọrọ inyere ya aka. Ọ na-akpaghị aka okụt soro aha maka niile songs gị iTunes n'ọbá akwụkwọ. Ke adianade do, ọ na-enye gị ikike iji wepụ duplicated songs. Wụnye a usoro na kọmputa gị ma mgbe ahụ, ka anyị hụ otú o si arụ ọrụ n'okpuru.
1 mbubata gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ka usoro ihe omume
Ẹkedori TidyMyMusic mgbe nwụnye. Mgbe ahụ ọ ga iṅomi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na-akpaghị aka ma tinye niile iTunes music ka idozi iTunes. TidyMyMusic ga-eme iTunes ịgụ isiokwu oge ọ bụla ị na-emeghe ya. Na otú ahụ, gị ọhụrụ kwukwara music gaghị Agbaghara.
2 Get track aha maka iTunes n'ọbá akwụkwọ
Ka mbụ nwere Doppler nke gị dum iTunes n'ọbá akwụkwọ. Pịa iṅomi bọtịnụ na nkụnye eji isi mee mgbe uhuruchi checkbox nke Chọọ maka unidentified Songs. Mgbe ahụ, a usoro ihe omume ga-ahụ na ozi maka ihe niile songs, gụnyere track aha.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị tinye akara checkbox nke Chọọ maka duplicated Songs na nkụnye eji isi mee, TidyMyMusic ga-enyere chọpụta duplicated songs na gị iTunes na ị na-ekpebi nke otu onye na-anọ na nke onye nwere ka na-aga.
3 Tinye na track aha ọ bụla song
Mgbe scanning na-achọ usoro dị n'elu, ị nwere ike pịa otu song na ego ya ọmụma na nri n'igbe. Mgbe na-eme n'aka na track aha ya bụ ziri ezi na otú bụ ndị ọzọ ozi dị ka album nkà, ị nwere ike pịa Mee button na-ọmụma agbakwunyere ka onye ọ bụla song. Ọ ga-aka mma na quicker ọ bụrụ na ị họrọ ọtụtụ songs na itinye n'otu oge.
Cheta na: Ị nwere ike a ohere nke abụọ ịgbanwe ọmụma site edezi site onwe gị. Pịa Dezie na akara ngosi na jupụta na edezi ubi. I nwekwara ike ịdọrọ ihe oyiyi na album nkà ebe.
The n'elu bụ otú i nwere ike inwe track aha maka gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na ogbe. Download a usoro na wụnye ya ka a na-agbalị. M n'aka na ị ga--ka ala.
Olee otú Tinye Album Art ka Music na ogbe